From Anushka To Parineeti: Nala Ogaaw Atirishooyinka Sanadkaan 2017 Heesaa Isku Badali Doonaan - Hablaha Media Network
From Anushka To Parineeti: Nala Ogaaw Atirishooyinka Sanadkaan 2017 Heesaa Isku Badali Doonaan
HMN:- Sanadihii ugu dambeeyay atirishooyinka Bollywood-ka waxay bilaabeen inay filimada kala duwan heeso ka qaadaan waana xirfad cusub oo atirisho kasto ku dhiiraneyso inay tijaabiso.
Hadaba sanadkaan 2017 atirishooyinka qaar ayaa isku badali doonaan heesayaal ama fanaan oo ccodkooda tijaabin doonaan si xirfadaan cusub taageerayaal kala duwan ugu kasbadaan.
Aan horey idiin xasuusino sanadihii aan kasoo gudubnay Sonakshi Sinha, Alia Bhatt iyo Shraddha Kapoor ayaa fanaaniin isku badaleen.
Fadlan hoos kaga bogo magacyada atirishooyinka sanadkan fanaan ama heesaayaal isku badali doonaan codkoodana tijaabain doonaan:
Anushka Sharma: xidigtaan waxay hees ka qaadeysaa filimkeeda Phillauri oo la daawan doono 24-ka bishan Maarso waana filim siweyn loo wada sugaayo.
Fadlan hoos ka daawo heesta Naughty Billo oo ay Anushka Sharma wax ka qaadeyso:
Parineeti Chopra: xidigtaan iyadana codkeeda ayay tijaaban doontaa waxayna hees ka qaadi doontaa filimkeedaMeri Pyaari Bindu oo ay la jileyso Ayushman Khuranna waxaana la daawan doonaa 19-ka bisha May 2017.
Amy Jackson: xidigtaan waxay hees la qaadi doonaa muusigiistaha Manjeet Ral waxayna hees ka qaadi doonaa filim Punjabi ah.
Richa Chadha: xidigtaan waxaa la sheegay inay tabbar ugu jirto sida heesaha loo qaado waxayna hees ka qaadi doontaa mid ka mid ah filimada sanadkaan usoo bixi doonto, balse faah faahin dheeri ah lagama soo bandhigin.